MAR UUN MAAD NA DHAAFTID: Gary Neville oo ku faraxsan ka tagista Sanchez ee kooxda Man United – Gool FM
(Manchester) 20 Agoosto 2019. Halyeeyga kooxda kubadda cagta ee Manchester Uniyed ee Gary Neville ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay in weeraryahanka reer Chile ee Alexis Sanchez uu ka tago garoonka Old Trafford.
Xiddigii hore ee kooxaha Barcelona iyo Arsenal ayaa qarka u saaran inuu ku biiro loolan cusub ee naadiga Inter Milan ah, kaddib markii leysku afgartay dhinacyo badan ee ku saabsan heshiiskan.
Tani maahan markii ugu horreysay uu Gary Neville weerar ku qaado mid ka mid ah xiddigaha isaga dhaqaaqay kooxda, wuxuu sidaan oo kale horey u dhaleeceeyay Romelu Lukaku, kaddib markii uu ku biiray Inter Milan.
Yeelkadeeda, halyeeyga kooxda kubadda cagta ee Manchester Uniyed ee Gary Neville oo ka hadlayay Alexis Sanchez ayaa wuxuu yiri:
“Waan ku guuleysaney imaatinkiisa kooxda, maxaa yeelay waa weeraryahan xoog badan, laakiin wuxuu noqday musiibo”.
“Wax fikrad ah kama haysto wixii dhacay. Malaha waa qof kale. Laacibkii aan ku aragnay Arsenal aad ayuu kaga duwan yahay kan ka soo muuqday Manchester, waana in runtii laga saaraa kooxda”.
“Lukaku ma uusan dooneynin inuu sii joogo kooxda, waxaa jira afar ama shan ciyaartoy oo aan dooneynin inay sii wataan kooxda, marka waa in Solskjær uu ka takhalusaa labo ka mid ah sanadkan, labada kalena sanadka xiga”.
Si kastaba ha noqotee, Sanchez ayaa u dhaqaaqay garoonka Old Trafford, wuxuuna kaga soo biiray Arsenal bishii Janaayo 2018, isagoo noqday ciyaaryahanka ugu mushaharka badan Red Devils, laakiin kaliya wuxuu dhaliyay 5 gool 45 kulan uu saftay.
Xiddiga reer Chile ayaa amaah ahaan ugu biiri doona kooxda Inter Milan, iyadoo uu heshiiska qeyb ka yahay in kooxda reer Talyaani ay xili ciyaareedka soo socda si toos ah ugu iibsan karto adeegiisa kaliya 15 milyan euro.